Isa LINSET paKali Linux | Linux Vakapindwa muropa
Darkcrizt | | Zvimwe Linux
Nekuda kwemhando dzakasiyana dzekushandisa dziripo, ndinoda kutarisa kune imwe kunyanya "LINSET". Tichifunga kuti vanhu vazhinji vanotenda kuti mashandiro ayo ndeyeku "rova Wi-Fi" dzidziso uye chokwadi chiri chimwe nekuti ndoda kuzvisarudzira se chishandiso chekubiridzira nekuti pakupedzisira mushandisi wedandemutande ndiye anopedzisira apa password neiyi nzira.
Linset ne Linset Haisi Yemagariro Enginering Chishandiso chishandiso chakagadzirwa munzvimbo yeGNU / Linux iyo inotibvumidza kuongorora network yeWi-Fi, izvo uchishandisa nzira yekuedzesera Izvo zvinotibvumidza isu kuwana kiyi tisina kana kuita chimwe chinhu sezvo chichava muridzi we network iyo inotipa isu kiyi.
Ichaita scan yepedyo netiweki dzeWi-Fi uye iratidze runyorwa rweaya.
Ipa kusarudza network kuti irwise.
Tsvaga kubatwa ruoko kwetiweki yakasarudzwa kunyangwe iyo inogona zvakare kushandiswa pasina kukwazisana
Sarudzo yekusarudza imwe yemafungidziro akafanogadzirirwa, kutsiva chaicho, apa chavanoita kugadzira peji reFake uko kwarinotibvunza isu data repaseti yedandemutande rakasarudzwa.
Iyo FakeAP yakasungirirwa kutevedzera zita repakutanga
Iyo DHCP server inogadzirwa pane iyo FakeAP
Seva yeDNS inogadzirwa kuti itungamirezve zvese zvikumbiro kuMubati
Iyo sevha yewebhu inotangwa neyaka sarudzwa interface
Iyo michina yekutarisa kuvimbika kwemapassword ekuti apinde anotangwa
Vese vashandisi veneti vanove-vakasimbiswa, vakamirira ivo kuti vabatanidze kuFakeAP uye vanyore password.
Kurwisa kunomira mushure mechokwadi password password
Kuziva mashandiro anoita LINSET, zvingave zvakakodzera kutarisa kana tiine zvakafanira kutsamira pane yedu Linux system yekumhanyisa LINSET paKali Linux.
Mune zvimwe zviitiko zvawataura kwandiri nedambudziko "rakaipa", zvichave zvakafanira kuisa chigamba, nekuti kana izvi zvisina kudaro, unogona kuve nematambudziko ekugona kuita kurwisa kweLINSET nenzira kwayo.
Usati waita kudaro, unofanirwa kuona kuti yako Wifi kadhi inoenderana neiyo yekutarisisa maitiro, sezvo zvichinyanya kukosha kuti ushandise Linset.
1 Dhawunirodha Linset
2 Mhanya LINSET
Nhanho yekutanga ichave kurodha pasi chishandiso, nekuti izvi unovhura iyo terminal uye woisa zvinotevera:
git clone https://github.com/creadpag/linset.git
Panguva ino tinogona kumhanyisa chishandiso, asi zvingangokanda chikanganiso pamwe neasipo kutsamira.
Kugadzirisa dambudziko iri isu tinofanirwa kuwedzera zvimwe zvinhu kuhurongwa, chinhu chekutanga kugonesa mamwe marekodhi.
Isu tinozviita na:
Uye isu tinowedzera aya marekodhi kune system:
Zvichava zvakafanira kuongorora kuti havana kudzokorora.
Mushure meizvi tinovhura terminal uye tinyore:
Nezve izvi tichave takagadzirisa zvinyorwa, izvo zviwanikwa kubva kwatinozotora zvishandiso zvinotevera izvo Linset inoda kushanda.
Izvo zvichatibvunza isu yekusimbiswa, isu tinonyora "s" uye isu tinopa Enter.
Nezve izvi isu tichagadzirisa chero chirongwa chechinyakare, izvi kuitira kuti zvisaunze matambudziko kana uchiita Linset.
Isu tinofanirwa kuisa mapakeji ayo Linset inoda kushanda, ayo anozotorwa kubva kumatura atakawedzera kare.
Isu tinonyora, mukati mechiteshi:
Izvo zvatangoita kuisa imwe yemapakeji akati wandei ayo Linset inoda kushanda, zviri nyore kwazvo
Pakupera kwemaitiro aya, tinozvimisikidza isu mukati mefaira ratakaburitsa kubva kuLinset kubva kuGit, pano izvo zvatinofanirwa kuita kupa mvumo yekuuraya uye kuenderera mberi nekushandisa chishandiso kuona kushanda kwayo.
Kubva panguva ino, mashandiro echishandiso ichi ibasa rako, nekuti mashandisiro aro ari pasi pebasa rako zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Isa LINSET paKali Linux
Rangarira kuti mune yekupedzisira Wifislax pane angangoita matatu mavhezheni eLinset. Kwaziso.
Cristian Romero akadaro
Yakanaka kwazvo posvo
Kana iwe uchiona zvichinetsa kuita zvese izvo zvinowedzera marekodhi ...
Ingoisa fluxion, uye nyora rairo yekuisa / kugadzirisa mapakeji (iwe unovhura fluxion, uye pakupedzisira inokuudza rairo)
Fluxion inotarisira kuisa mapakeji anodiwa, (nenzira iyo zvakare chishandiso chakanaka kutsemura wifi)
Uye zvino vanoisa linset uye ichavhura ivo pasina matambudziko
Pindura kuna Cristian Romero
Xterm inoratidzika kwandiri kuti haina kuiswa, ndeupi murairo wekuisirwa kwayo? , nekuti neyakakodzera-kuitora haishande
Pindura kuna Buddha
Maitiro ekuisa iyo keyboard muSpanish muArch Linux